Home Wararka Dhexdhexaadin laga dhexwado AhluSunna iyo Qoor Qoor? Maxa soo kordhay?
Dhexdhexaadin laga dhexwado AhluSunna iyo Qoor Qoor? Maxa soo kordhay?
Cadaadis xoog leh oo kaga yimid beesha Caalamka ayaa ku qasbay Qoor Qoor in uu wadahadal la furo Ururuka AhluSunna. Taliyaha Ururka 6aad ee Guutada 60-aad ee Ciidamada Xoogga Dalka General Aadan Abshir Nuure Laba-Afle oo wehliyaan ganacsato, Odoyaal iyo Xildhibaan Cali Dhoof oo ka tirsan baarlamaanka Galmudug ayaa gaaray deegeenka Bohol ee gobolka Galgaduud halkaas oo uu ku suganyahay Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan oo hoggaaminaya ciidankii Ahlusunna ee dhawaan ka baxay Guriceel.
Ujeedka wafdiga ayaa ah xal u helida dagaaladii ka dhacay Guriceel iyo deegaanka Bohol ee gobolka Galgaduud ee u dhexeeyay ciidanka Ahlusunna kuwa dowlada Faderaalka Soomaaliya oo kaashanaya kuwa Dowlad-goboleedka Galmudug ee bartamaha dalka.
“Ujeedka Saraakiisha waa in ay la kulmaan Sheekh Shaakir kalana hadlaan sidii xiisada Galmudug wada hadal loogu dhamayn lahaa maadaama aan dagaaladii hore laga dhaxlin wax aan qasaaro iyo barakac ahayn” ayuu yiri mid ah saraakiisha baxay Dhuusamareeb oo diiday in aan xigano magaciisa sababtoo ah oo ogola in uu ka hadlo arrintaan.
Ganacsade Xaashi Carabeey, oo horay ugu guulaystay in uu joojiyo dagaalkii Guriceel Ahlusunna ugu qanciyo in ay magaaladda ka baxdo ayaa ka mid ah wafdiga maanta wada hadalka u tagay deegaanka Bohol ee gobolka Galgaduud.
28October 2021, Sheekh Shaakir oo ka hadlay sababta ay uga bexeen Guriceel ayaa sheegay in ay magaaladda ugu bexeen codsi uga yimid Culimada, Ganacsatada, bulshada rayidka, Senataro iyo Siyaasiyiin reer Galmudug ah ayna sugayaan in wada hadal lagu dhameeyo dagaalka balse saraakiisha Galmudug ayaa diiday dagaalkaasi wada hadal lagu joojiyay.
Macalin Maxamuud Sheekh Xasan iyo Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan oo 11 September 2021, ku laabtay deegaanada maamulka Galmudug ayaa abaabulay ciidamo daacad u ah oo ay sheegeen in ay qaadayaan guluf ka dhan ah dagaalyahanada Al Shabaab.
Ciidanka ay abaabuleen oo u badan ciidankii ay ku wareegiyeen Dowladda Faderaalka ah bartamihii 2019, ayaa hada ku sugan deegaanka Bohol oo dhaca waqooyiga gobolka Galgaduud ka dib markii ay Guriceel ka bexeen 27 October iyaga oo ciidanka dowladda iyo kuwa Galmudug la galay dagaal socday afar maalin oo xiriir ah.